ဝိတ်ကျချင်လား? ဒီပလန်အတိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် စားကြည့်ပါ။ - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ … ခုခေတ်ကြီးမှာ ကြီးကြီးငယ်ငယ်မရွေး Gym ဆော့ကြ၊ အစားအသောက် ဆင်ခြင်ကြဆိုတာက မထူးဆန်းတော့တဲ့ အရာတစ်ခုပေါ့.. ဒါမှလည်း ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ကျစ်လျစ်သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပေါ့… ခက်တာက တချို့ယောင်းလေးတွေက ဝိတ်ကလည်း ကျချင်သေးတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ကလည်း အချိန်မပေးနိုင် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်.. မပူပါနဲ့.. ယောင်းတို့အတွက် ဝိတ်လည်းကျ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီစေမယ့် (၅)ရက်စာ အစားအသောက်ပလန်လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..
ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို ကယ်လိုရီ (၂၀၀၀) လောက် စားသင့်ပြီး တစ်ပတ်ကို တစ်ပေါင်လျော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ကယ်လိုရီ (၁၅၀၀) ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ ခု Stella ပြောပြပေးမှာက ဝိတ်လျှော့ဖို့အတွက် သီးသန့်ဆိုတော့ တစ်ရက်စာ ပလန်ထဲမှာ ကယ်လိုရီ (၁၅၀၀)စာပဲ ရှိအောင် တွက်ထားပေးပါတယ်နော်… အမလေး.. ကယ်လိုရီ (၁၅၀၀)ပဲဆိုတော့ ရေလုံပြုတ်တွေပဲ စားခိုင်းတော့မှာလားလို့ တွေးနေပြီလား? မပူပါနဲ့ စားကောင်းပြီး အရသာရှိမယ့် စားစရာလေးတွေပဲ ယောင်းတို့အတွက် ရွေးထားပေးတာပါနော်.. စိတ်ချလက်ချသာ ဖတ် 😛
မနက်စာ – အဆီထုတ်ပြီးသား ဒိန်ချဉ်နဲ့ ချောကလက်နို့ကို နှစ်ဆတစ်ဆရောပြီး peanut butter နှစ်ဇွန်းနဲ့ blender ထဲထည့်မွှေလိုက်ရင် ပထမနေ့အတွက် မနက်စာ smoothie တစ်ခွက်ရပါပြီ။
နေ့လယ်စာ – နေ့လယ်စာအတွက်တော့ ကြက်ရင်ပုံသား၊ ဆလပ်ရွက်၊ သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ မယ်ရိုးနိစ်တစ်ဇွန်းလောက်ပါတဲ့ ဆင်းဒွစ်ခ်ျတစ်ခုနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်လိုက်ပါ။
ညစာ – ငါးကို ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကညွတ်တို့နဲ့ ဆားနည်းနည်းလေးထည့်ပြီး ပေါင်းစားတာက ဒီနေ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ညစာလေးပေါ့။
မနက်စာ – မနက်စာကို ဘယ်ရီအနည်းငယ်နဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်ဝက်ကို အဆီမပါတဲ့နွားနို့နဲ့ရောပြီး ဖျော်သောက်ပါ။ အာသာမပြေရင် ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးလောက် ထပ်စားလို့ရပါတယ်။
နေ့လယ်စာ – ပူပူနွေးနွေး အသီးအရွက်စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်သောက်ပါ။ အချိုမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်လုံးဝမထည့်ပါနဲ့။ စပျစ်သီးအနည်းငယ် အချိုတည်းလို့ရပါသေးတယ်။
ညစာ – ကြက်ရင်ပုံကင်ကို ဟင်းနုနယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူအနည်းငယ်၊ သံလွင်ဆီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူးပြုတ်တို့နဲ့ သုတ်ထားတဲ့ Salad တစ်ပွဲနဲ့ တွဲစားပါ။
မနက်စာ – ကြက်ဥမွှေကြော်တစ်လုံးနဲ့ ကော်ဖီကို မနက်စာအဖြစ်စားနိုင်ပါတယ်။
နေ့လယ်စာ – ကြက်သားပြုတ်ကို စပျစ်သီး၊ သစ်ကြားသီး၊ မယ်ရိုးနိစ်တစ်ဇွန်း၊ ဒိန်ချဉ်တစ်ဇွန်း၊ ဆလပ်ရွက်အနည်းငယ်နဲ့ သုတ်စားပါ။ မဝသေးရင် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးစားလို့ရပါတယ်။
ညစာ – ညစာကတော့ ပုစွန်နဲ့အာလူးကိုပြုတ်ထားတဲ့ တစ်ပန်းကန်ကို ဟင်းနုနယ်ပြုတ်တစ်ပန်းကန်၊ ဒိန်ချဉ်တစ်ဇွန်းနဲ့ တွဲစားပါ။
မနက်စာ – ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်ကို ဘယ်ရီသီးအနည်းငယ်၊ ပျားရည်အနည်းငယ်နဲ့ တွဲဖက်ထားလိုက်ပါ။
နေ့လယ်စာ – တူနာငါးကို ခရမ်းချဉ်သီး အသေးလေးတွေ၊ သခွားသီးစိတ်တွေနဲ့အတူ ရှာလကာရည်နည်းနည်းနဲ့ သုပ်စားပါ။
ညစာ – အမဲသားစတိတ်အနည်းငယ်ကို မုန်လာဥနီပြုတ်၊ အာလူးပြုတ်တွေနဲ့ ညစာအဖြစ်စားလို့ရပါတယ်။
မနက်စာ – ပေါင်မုန့်ကင်နဲ့ ကြက်ဥပြုတ်နှစ်လုံးကို မနက်စာအဖြစ်စားပါ။
နေ့လယ်စာ – ကြက်သားပြုတ်ပါတဲ့ အရွက်သုပ်တစ်ပန်းကန်နဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးဆို လုံလောက်ပါပြီ။
ညစာ – ညစာကိုတော့ ဆယ်လ်မွန်ငါးကို သံပုရာသီးနဲ့ပေါင်းပြီး ကညွတ်ပြုတ်အနည်းငယ်နဲ့ စားပေးပါ။
ကဲ … ဒီလို (၅)ရက်ဆက်တိုက်စားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ယောင်းရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်က သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တကယ်တော့ အစားအသောက်ပလန်တစ်ခုတည်းထက် လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ထိရောက်မှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
ယောင်းတို့ကို အမြဲယုံကြည်မှုရှိရှိလှနေစေချင်တဲ့ …
References : Healthline , Eating Well
ဝိတျတော့ကခြငျြပါရဲ့… မစားဘဲလညျး မနနေိုငျဘူးဆိုတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ…
ယောငျးတို့ရေ … ခုခတျေကွီးမှာ ကွီးကွီးငယျငယျမရှေး Gym ဆော့ကွ၊ အစားအသောကျ ဆငျခွငျကွဆိုတာက မထူးဆနျးတော့တဲ့ အရာတဈခုပေါ့.. ဒါမှလညျး ကနျြးမာရေးကောငျးပွီး ကဈြလဈြသှယျလတြဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေး ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပေါ့… ခကျတာက တခြို့ယောငျးလေးတှကေ ဝိတျကလညျး ကခြငျြသေးတယျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျဖို့ကလညျး အခြိနျမပေးနိုငျ ဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈနတေတျပါတယျ.. မပူပါနဲ့.. ယောငျးတို့အတှကျ ဝိတျလညျးကြ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး ညီစမေယျ့ (၅)ရကျစာ အစားအသောကျပလနျလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျရှငျ..
ပုံမှနျအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ တဈရကျကို ကယျလိုရီ (၂၀၀၀) လောကျ စားသငျ့ပွီး တဈပတျကို တဈပေါငျလြော့ဖို့အတှကျဆိုရငျတော့ ကယျလိုရီ (၁၅၀၀) ပဲ စားသငျ့ပါတယျ။ ခု Stella ပွောပွပေးမှာက ဝိတျလြှော့ဖို့အတှကျ သီးသနျ့ဆိုတော့ တဈရကျစာ ပလနျထဲမှာ ကယျလိုရီ (၁၅၀၀)စာပဲ ရှိအောငျ တှကျထားပေးပါတယျနျော… အမလေး.. ကယျလိုရီ (၁၅၀၀)ပဲဆိုတော့ ရလေုံပွုတျတှပေဲ စားခိုငျးတော့မှာလားလို့ တှေးနပွေီလား? မပူပါနဲ့ စားကောငျးပွီး အရသာရှိမယျ့ စားစရာလေးတှပေဲ ယောငျးတို့အတှကျ ရှေးထားပေးတာပါနျော.. စိတျခလြကျခသြာ ဖတျ 😛
မနကျစာ – အဆီထုတျပွီးသား ဒိနျခဉျြနဲ့ ခြောကလကျနို့ကို နှဈဆတဈဆရောပွီး peanut butter နှဈဇှနျးနဲ့ blender ထဲထညျ့မှလေိုကျရငျ ပထမနအေ့တှကျ မနကျစာ smoothie တဈခှကျရပါပွီ။
နလေ့ယျစာ – နလေ့ယျစာအတှကျတော့ ကွကျရငျပုံသား၊ ဆလပျရှကျ၊ သခှားသီး၊ ခရမျးခဉျြသီးနဲ့ မယျရိုးနိဈတဈဇှနျးလောကျပါတဲ့ ဆငျးဒှဈချြတဈခုနဲ့ ဗိုကျဖွညျ့လိုကျပါ။
ညစာ – ငါးကို ပနျးဂျေါဖီစိမျး၊ ကညှတျတို့နဲ့ ဆားနညျးနညျးလေးထညျ့ပွီး ပေါငျးစားတာက ဒီနအေ့တှကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ညစာလေးပေါ့။
မနကျစာ – မနကျစာကို ဘယျရီအနညျးငယျနဲ့ ငှကျပြောသီးတဈဝကျကို အဆီမပါတဲ့နှားနို့နဲ့ရောပွီး ဖြျောသောကျပါ။ အာသာမပွရေငျ ကွကျဥပွုတျတဈလုံးလောကျ ထပျစားလို့ရပါတယျ။
နလေ့ယျစာ – ပူပူနှေးနှေး အသီးအရှကျစှပျပွုတျတဈခှကျသောကျပါ။ အခြိုမှုနျ့၊ ကွကျသားမှုနျ့လုံးဝမထညျ့ပါနဲ့။ စပဈြသီးအနညျးငယျ အခြိုတညျးလို့ရပါသေးတယျ။
ညစာ – ကွကျရငျပုံကငျကို ဟငျးနုနယျ၊ ကွကျသှနျဖွူအနညျးငယျ၊ သံလှငျဆီ၊ ခရမျးခဉျြသီး၊ အာလူးပွုတျတို့နဲ့ သုတျထားတဲ့ Salad တဈပှဲနဲ့ တှဲစားပါ။
မနကျစာ – ကွကျဥမှကွေျောတဈလုံးနဲ့ ကျောဖီကို မနကျစာအဖွဈစားနိုငျပါတယျ။
နလေ့ယျစာ – ကွကျသားပွုတျကို စပဈြသီး၊ သဈကွားသီး၊ မယျရိုးနိဈတဈဇှနျး၊ ဒိနျခဉျြတဈဇှနျး၊ ဆလပျရှကျအနညျးငယျနဲ့ သုတျစားပါ။ မဝသေးရငျ ငှကျပြောသီးတဈလုံးစားလို့ရပါတယျ။
ညစာ – ညစာကတော့ ပုစှနျနဲ့အာလူးကိုပွုတျထားတဲ့ တဈပနျးကနျကို ဟငျးနုနယျပွုတျတဈပနျးကနျ၊ ဒိနျခဉျြတဈဇှနျးနဲ့ တှဲစားပါ။
မနကျစာ – ဒိနျခဉျြတဈခှကျကို ဘယျရီသီးအနညျးငယျ၊ ပြားရညျအနညျးငယျနဲ့ တှဲဖကျထားလိုကျပါ။
နလေ့ယျစာ – တူနာငါးကို ခရမျးခဉျြသီး အသေးလေးတှေ၊ သခှားသီးစိတျတှနေဲ့အတူ ရှာလကာရညျနညျးနညျးနဲ့ သုပျစားပါ။
ညစာ – အမဲသားစတိတျအနညျးငယျကို မုနျလာဥနီပွုတျ၊ အာလူးပွုတျတှနေဲ့ ညစာအဖွဈစားလို့ရပါတယျ။
မနကျစာ – ပေါငျမုနျ့ကငျနဲ့ ကွကျဥပွုတျနှဈလုံးကို မနကျစာအဖွဈစားပါ။
နလေ့ယျစာ – ကွကျသားပွုတျပါတဲ့ အရှကျသုပျတဈပနျးကနျနဲ့ ငှကျပြောသီးတဈလုံးဆို လုံလောကျပါပွီ။
ညစာ – ညစာကိုတော့ ဆယျလျမှနျငါးကို သံပုရာသီးနဲ့ပေါငျးပွီး ကညှတျပွုတျအနညျးငယျနဲ့ စားပေးပါ။
ကဲ … ဒီလို (၅)ရကျဆကျတိုကျစားပွီးပွီဆိုရငျတော့ ယောငျးရဲ့ကိုယျအလေးခြိနျက သိသိသာသာပွောငျးလဲသှားတာကို တှရေ့မှာပါ။ တကယျတော့ အစားအသောကျပလနျတဈခုတညျးထကျ လကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ တှဲလိုကျမယျဆိုရငျ ပိုပွီးတော့ ထိရောကျမှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
ယောငျးတို့ကို အမွဲယုံကွညျမှုရှိရှိလှနစေခေငျြတဲ့ …
Tags: calories, diet, Fitness, Food, Health, Healthy, lifestyle, meal, Weight loss